Banyere Anyị - Jiangsu Huanneng Silicon Carbon Ceramics Co., Ltd.
Jiangsu Huanneng Silicon Carbon Ceramics Co., Ltd. e guzobere na 2001, anyị na-arụpụta ihe nrụpụta dị elu nke silicon carbide kpo oku, ebe anyị guzobere, anyị na-arụpụta ọgbara ọhụrụ na ngwaahịa dị elu site na mmụọ nke imepụta ihe ọhụrụ. 2006, anyị kwadoro na Silicon Carbide Materials Research Institute ịzụlite ọhụrụ sịlịkọn carbide kpo oku ọcha, na nakweere Kacha ọhụrụ mmepụta akụrụngwa na ụlọ ọrụ ọhụrụ mmepụta technology, na SICTECH ika sịlịkọn carbide kpo oku ọcha mepụtara anyị na-ọma natara site ahịa.
SICTECH na-enye nkọwa dị iche iche nke ezigbo sịlịkọn carbide kpo oku: GD (ogologo mkpanaka) ụdị, HGD (oke njupụta ogologo), ụdị U, W (mpaghara atọ), ụdị LD (otu eri), LS (eri abụọ) ) ụdị na ngwaahịa ndị ọzọ, ọnọdụ okpomọkụ kachasị elu dị elu nwere ike iru 1625 Celsius.
A na-eji ngwaahịa anyị eme ihe n'ọtụtụ ụlọ ọrụ ọgwụgwọ ọkụ dịka iko, seramiiki, ihe magnetik, ntụ ntụ, ma bupụ ya karịa mba 30 na mpaghara ụwa.
Ntụ ntụ metallurgy sintering
Aluminium alloy dissolving, Nkedo mkpuchi, merela agadi ọgwụgwọ
Gas carburizing na harden nke ụgbọ ala, ụgbọ elu na akụkụ igwe
Carburizing, nitriding na annealing nke ígwè akụkụ
Engba oyi na iwe nke ebu dị iche iche, waya nchara, wdg.
Na-egbuke egbuke ọgwụgwọ nke ọla
Iwe iwe na ịgbado ọkụ nke akụkụ igwe
Nyocha carbon ma ọ bụ sọlfọ ahụ
Firing nke seramiiki capacitors
Sintering nke alumina na talc
Njuputa nke igwe ihe pezoelectric
Fire nke IC mkpụrụ
Nụgharia nke ndị na-emechi seramiiki, varistors, thermistors
Sintering na calcination nke ferrite
Annealing okpomọkụ ọgwụgwọ nke larịị ígwè efere, ígwè, ngwa anya eriri, ngwa anya diski na na
Fusion, mkpuchi ihe na nwayọ nwayọ nke iko
N'elu ọgwụgwọ nke iko
Usoro ọgwụgwọ nke kristal mmiri mmiri
Nlụpụta nke nchekwa iko
firing na n'ichepụta nke ceramik na iko eriri
ogbugba nke quartz ngwaọrụ
Ule nke dị iche iche refractory
Firing nke phosphors na pigments dị iche iche
Combustion nke mkpali
Kpo oku gas
Akọrọ distillation, coking, degreasing
Agbapụ ọkụ carbon ọrụ
Ọcha ọkụ, deodorizing oku
Dị iche iche akwa okpomọkụ ọkụ
Ngwongwo nke oku na oku oku
Obodo kpo oku
Ngwaahịa na-eri ọnụ
Oge nnyefe ọsọ ọsọ
Companylọ ọrụ anyị nwere otu ndị ọkachamara mara mma, ndị nwere ike ịhọrọ atụmatụ kachasị mma dabere na ahụmịhe anyị na ngwaahịa na njirimara ngwaahịa iji nye ndị ọrụ imepụta ọrụ. Anyị nwere ikike mmepe dị elu, ma nwee ike ịmalite ndị nrụpụta pụrụ iche dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị iche, anyị nwekwara ike inye ndị ahịa ngwaahịa ndị ahaziri n'okpuru ọnọdụ ojiji pụrụ iche.